Dhageyso:-Tirada dadka ku dhintey dagaal ka dhacay J/Hoose oo korortay | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Tirada dadka ku dhintey dagaal ka dhacay J/Hoose oo korortay
Dhageyso:-Tirada dadka ku dhintey dagaal ka dhacay J/Hoose oo korortay
Waxaa kordhey tirada dad ku dhintey dagaal beeleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaano duleedka ka ah Magaalada kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka oo u dhaxeeya labada maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ay isku heystaan Ceel laga qodey deegaanka Haadweyne,waxaana dagaalkaas uu ku fidey deegaannada,Dalsan,Haadweyne iyo deegaano kale,waxana uu u badnaa dilal gaadmo ah.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux oo labada dhinac ee wada dagaalamay ah.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray,isaga oo la hadlayay Idaacadda Voa-da in Dowlad goboleedka Jubbaland iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Jubbada Hoose ay ku howlan yihiin sidii dagaal beeleedkaas xal looga gaari lahaa.
Sanad ka hor ayaa mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland waxaa ay xal ka gaareen dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Dalsan iyo deegaano u dhow dhow,hayeeshee uu markale dib u bilaawdey.
Previous articleDhageyso:-Dalal ay Somalia ku jirto oo gaarey Heshiis Cusub
Next articleDhageyso Korneyl Macow ” Hay’adda NISA Waxa ay xayeysiin u sameyneysaa Al Shabaab”